यस्ता ५ प्रकारका जिब्रो भएका महिला हुन्छन् साह्रै असल र भाग्यमानी, तपाईको कस्तो छ ? – Khabaarpati
November 5, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on यस्ता ५ प्रकारका जिब्रो भएका महिला हुन्छन् साह्रै असल र भाग्यमानी, तपाईको कस्तो छ ?
काठमाडौ । ज्योतिशी शास्त्री र विभिन्न तथ्यपरक खोजको आधारमा मानिसहरुको जिब्रोको आकार र मोटाई हेरेरै व्यक्तिको व्यक्तित्व तथा स्वभाव जान्न सकिने बताएका छन्। हरेक मानिसहरुको पहिचान उसको शारिरिक हाउभाउ र बोलचालबाट थाहा हुन्छ । त्यसका साथै निकै लामो खोज र अनुसन्धारको आधारमा यस्तो प्रकारको जिब्रो भएको मानिस पनि साह्रै असल र भाग्यमानी हुन्छन् । हेरौ कही तपाईको भाग्यले मोड लियो कि ?
पहिलो सानो जिब्रो भएको मानिस, यो प्रकारको जिब्रो भएको मानिस साह्रै असल र भाग्मानी हुन्छन्। किनभने उनीहरु कम बोल्ने र शान्त स्वभाव भएका र मिहेनती हुन्छन्। जो अरुको सफलतामा रमाएर आफु पनि सफल बन्छन्।
दोस्रोमा पातलो जिब्रो भएको मानिस, यो प्रकारको जिब्रो भएको मानिसहरु पनि सानो जिब्रो भएकाहरु जस्तै सामान्य स्वभावकै हुन्छन् । जसले गर्दा आफुले गरेको काममा सधै मिहेनत गर्ने, अर्कालाई कहिल्यै चोट नपुयाउने विशेषता भएका हुन्छन्।
तेस्रोमा लामो जिब्रो भएको मानिस,यो किसिमको जिब्रो भएका मानिसहरु पनि धेरै वुद्धिमानी ,मिहेनती हुन्छन्। यदि लामो जिब्रो भएका पुरुषहरु भए मलिाहरुलाई धेरै माया गर्ने हुन्छन् । त्यस्तै महिला भए पुरुषलाई धेरै माया गर्ने हुन्छन्।
चौथोमा मोटो जिब्रो भएको मानिस, मोटो जिब्रो भएका मानिसहरु धेरै रिसाहा ,गनगने , झगडालु र डुलेर खाने बानी भएका मानिसहरु हुन्छन् । जसले घरमा आफ्नै मात्र शासन चलाउने गर्दछन भने अरुको सफलता डाहा गर्ने हुन्छन्।पाचौमा चुच्चो जिब्रो भएका मानिस , चुच्चो जिब्रो भएका मानिसहरु पनि मोटा जिब्रो भएको मानिसहरु जस्तै खराब स्वाभावको हुन्छन् । जो अरुको राम्रो काम बिर्गानमा निकै चलाख र खुट्टा तान्ने प्रवृतिका हुन्छन्।
छैटौमा गोलो जिब्रो भएको मानिस गोलो जिब्रो भएको मानिसहरु एकदमै सिधा र कमलो मन भएका हुन्छन्। जसमा अरुको दुखमा साथ दिने अप्ठ्यारो परेको बेलामा हात असल स्वाभाव हुन्छ।
सातौमा रातो जिब्रो भएका,रातो जिब्रो भएकाहरु निकै डरपोक र गफाडी हुन्छन् । जो अरुको बहकाईमा लागेर खराब काम गर्न पनि तयार हुन्छन्।
आठौमा सेतो जिब्रो भएका , यस्ता जिब्रो भएकाहरु पनि समाज र साथीभाइमा मिलेर बसी धन , सम्मान कमाई आफ्नो परिवारको धेरै माया गर्दछन्। र चलाख पनि हुन्छन्।